အထွေထွေရောဂါများ Archives - Page 30 of 45 - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
ခေါင်းကိုက်ခြင်းအတွက်အဖြေရှိပြီလား? ဒီနေ့သဉ္ဇာတစ်ယောက် ရုံးရောက်လာကတည်းက ဘယ်သူ့ကိုမှ ပြုံးမပြနိုင်ပါဘူး။တစ်နေကုန် ဘယ်သူနဲ့မှစကားမပြောဘဲတစ်ယောက်ထဲ ရုံးကအလုပ်တွေလုပ်၊ အစည်းအဝေးတွေတက်၊ မျက်နှာထားခပ်တင်းတင်းဖြစ်နေသည်။ ရုံးကသူငယ်ချင်း လုလုက သဉ္ဇာကို မျက်နှာငယ်လေးနဲ့လာမေးသည်။ ” ဟဲ့ နင်ငါ့ကို စိတ်ဆိုးနေတာလား? ငါမနေ့က နင်နဲ့ အတူပြန်မယ်ပြောပြီးမပြန်လို့လေ? ဒါမှမဟုတ် ဂျာကြီးနင့်ကို…
မျက်စိစွန်ခြင်း( အပြင်စွန်) မျက်စိစွန်ခြင်း (အပြင်စွန်) ဆိုသည်မှာ မျက်တောင်အခြေတွင် ရှိသော ဂလင်းအကြိတ် ငယ်များတွင် ရောဂါပိုးတစ်မျိုးဝင်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်သောပြည်တည်နာ တစ်မျိုးကို ခေါ်သည် ။စတိုင်း (Stye) ဟုလည်း ဆေးပညာ အရ ခေါ်ပေသည် ။ ဘယ်သူတွေမှာ ပိုဖြစ်တတ်လဲဆိုရင်ဖြင့်…
” မိုးရာသီချိန်ခါ လျှပ်စစ်အန္တရာယ်ကာကွယ်နိုင်စေဖို့ရာ “ ရေဟာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား တစ်နေရာမှတစ်နေရာကို မတော်တဆကူးသွားတဲ့အန္တရာယ်ကို အပေးနိုင်ဆုံးအရာပါ။ ဒါကြောင့် စိုစွတ်တဲ့မိုးရာသီကာသီကာလဟာ လျှပ်စစ်အန္တရာယ်ကိုအကြောက်ရဆုံးအချိန်အခါတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အခုလိုမိုးတွင်းအချိန်အခါမှယ လျှပ်စစ်ဓာတ်လိုက်ခြင်းအန္တရာယ်ကို ကာကွယ်နိုင်စေရန် ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်အချက်များကို တင်ပြလိုက်ရပါတယ်။ ၁။ လုပ်ငန်းလိုင်စင်တံဆိပ် တိတိကျကျရှိသော…
ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်ခြင်း လူအများစုအတွက် ခေါင်းကိုက်တယ်ဆိုတာ မကြာခဏဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အိပ်ရေးပျက်တာ၊ ဖျားနာတာတွေကြောင့် ခေါင်းကိုက်တာတွေလဲ ကြုံဖူးမှာပါ။ migraineဆိုတာကတော့ သာမန်ခေါင်းကု်က်တာထက်ပိုပြီးပြင်းထန်ပါတယ်။ အလုပ်အကိုင်ပျက်လောက်အောင်ကို ဖြစ်စေတာမို့ သတိထားကြဖို့လိုပါတယ်။ ခေါင်းကိုက်ရင် တစ်ခြမ်းတည်းကိုက်တာ၊ တစ်ခြမ်းကပိုကိုက်တာ၊ အသံစူးစူး၊ အလင်းတောက်တောက်တွေကြောင့်ပိုကိုက်တာ၊ ခေါင်းကိုက်ခါနီးအစက်အစက်တွေမြင်တာ အစရှိတာတွေက migraineရဲ့ ထူးခြားချက်တွေပါ။…
” အရေးပေါ်ဖုန်း “ ဖုန်းမြည်သံကြောင့် ဒေါက်တာစိုးတစ်ယောက် လန့်နိုးသွားသည်။အချိန်ကြည့်လိုက်တော့ မနက် ၂နာရီ၊ ဖုန်းခေါ်နေသူက ညီမဝမ်းကွဲဖြစ်သူ မီ်းငယ်…..။ ရုတ်တရက်စိတ်ပူသွား..မျက်လုံးပင်ကျယ်သွားသည်။ ဟုတ်တယ်လေ…ဒီအချိန်ကြီး ဖုန်းခေါ်တယ်ဆိုတော့..ဘယ်သူများ ဘာများဖြစ်လဲပေါ့…။ ” ဟဲလို “… ” ဟယ်လို ကိုကြီးရေ…ကယ်ပါဦး… ”…
သည်းခြေကျောက် ကိ ုဘယ်လိုကုသမလဲ? သည်းခြေမှာကျောက်တည်တယ်လို့သိလိုက်တဲ့အခါ လူနာတော်တော်များများ ပြောလေ့ရှိတာက ” မခွဲခြင်ဘူးနော်ဆရာမ” ” မခွဲဘဲပျောက်အောင်လုပ်ပေးပါ” ” ခွဲရမယ်ဆိုဆက်မကုတော့ဘူးနော် ဆရာမ” လို့ပြောလေ့ရှိပါတယ်။ သည်းခြေကျောက်ကမကုဘဲထားရင် ဘာတွေဖြစ်မလဲ? ခွဲစိတ်တာအပြင်အခြားမရှိတော့ဘူးလား? ဆက်ဖတ်ကြည့်ပါနော်။သည်းခြေကျောက်ဟာ တစ်ခါတစ်ခါ ဗိုက်ထဲမှာရှိနေပေမယ့် မနာမကျင် ဒုက္ခမပေးတတ်ပါဘူး။…
ဖျားနာချိန်မှာ ဘာကြောင့်ပါးစပ်ပျက်သလဲ မိုးရာသီရောက်တဲ့အချိန်အခါဟာ လူတွေမှာ အအေးမိဖျားနာတုပ်ကွေးအဖြစ်ကြဆုံးအချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုဖျားနာကြပြီဆိုရင် အပူချိန်တက်ခြင်းနဲ့အတူ စားချင်သောက်ချင်စိတ်မရှိဘဲ ပါးစပ်ပျက်ကြခြင်းလည်း တွဲလျက်ဖြစ်ပွားကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ ဒီလိုပါးစပ်ပျက်ရခြင်း၊ ပါးစပ်ခါးခြင်းဟာ ဘာကြောင့်လဲလို့ ကြည့်ကြရအောင်လား။ အအေးမိတဲ့အခါမှာ နှာစေးနှာပိတ်ခြင်းဟာလည်းတွဲလျက်ပါလာတတ်ပါတယ်။ ဒီအခါ နှာခေါင်းတွင်းမှာ နှာရည်များပိတ်ဆို့ပြီး အနံ့ခံနိုင်စွမ်းလည်းနည်းပါးသွားပါတယ်။ အစားအစာစားသောက်တဲ့အခါ အနံ့နဲ့အရသာဟာ…
အနာ့ပဆုတ် အနာ့ပဆုတ်လို့ကြားလိုက်ရင် ဗမာလူမျိုးတစ်ချို့ကတော့ အရေပြားနာရိုးရိုးပဲလို့ ယူဆတတ်ကြပါတယ်။ ဆေးလိမ်းရင်ပျောက်သွားမှာပါ၊ သူ့ဟာသူပျောက်မှာပေါ့ စသည်ဖြင့်အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့နေတတ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အနာ့ပဆုတ် အဲ့ဒီလောက်မရိုးရှင်းလှပါဘူး။ အခန့်မသင့်ရင် နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေ တစ်သီတစ်တန်းကြီးပေးနိုင်ပါတယ်။ အနာ့ပဆုတ်ဆိုတာ အရေပြားနာတစ်မျိုးပါပဲ။ အရေပြားသာမက အရေပြားမှာရှိတဲ့ မွှေးညှင်း၊ မွှေးညှင်းတွေရဲ့အမြစ်၊ အရေပြားအောက်က နူးညံ့တဲ့…
Keloids & hypertrophic scars(ကီးလွိုက်နဲ့အမာရွတ်ကြီးများအကြောင်း မှတ်သားဖွယ်ရာများ) ကီးလွိုက်(keloid)ဆိုတာဘာလဲ?? အနာဖြစ်သောနေရာတွင်ကော်လဂျင် (collagen)လိုအပ်သည်ထက်ပို၍ထွက်ခြင်းကြောင့် မူလဒဏ်ရာထက်ကြီး၍ ဖြစ်လာသောအမာရွတ်ကို ကီးလွိုက်ဟုခေါ်သည်။ ကိုင်ကြည့်လျှင် ရာဘာကဲ့သို့်တင်းတင်းရင်းရင်း (သို့) မာမာဖုဖု အမျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်သည်။ အရောင်မှာလည်း ပန်းရောင်၊အနီရောင်၊အသားရောင်(သို့) အညိုရောင် ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ဘယ်လိုလူမျိုးတွေမှာအဖြစ်များလဲ? ၁၀နှစ်…